Ahoana ny fandanjana ny fividianana vs. ezaka hitazomana | Martech Zone
Ahoana ny fandanjana ny fiezahana mihazona ny ezaka fitanana
Rehefa manandrana mahazo mpanjifa vaovao aho dia mino tokoa fa ny sakana lehibe indrindra tsy maintsy resinao dia ny fitokisana. Te-hahatsapa ny mpanjifa fa toa hihaona na hihoatra ny fanantenana amin'ny vokatrao na serivisinao ianao. Amin'ny fotoan-tsarotra ara-toekarena, ity dia mety ho singa lehibe kokoa aza satria ny prospecta dia miambina kokoa amin'ny vola tadiavin'izy ireo. Noho izany dia mety mila manitsy ny ezaka marketing ianao mba hiankina amin'ny mpanjifanao efa misy.
Ny fihazonana dia tsy afaka ny ho paikadinao manontolo, amin'ny alalàn'ny. Ny fihazonana dia miteraka orinasa mahasoa ary midika izany fa mahomby amin'ny fanomezana lanja ny mpanjifanao ianao. Na izany aza, raha tsy mahazo mpanjifa vaovao tsy tapaka ianao dia misy lafiny ratsy:
Ireo mpanjifanao manan-danja dia mety hamela anao ho marefo raha miala izy ireo.
Ny ekipan'ny varotrao dia mety tsy mavitrika amin'ny fiezahana hanakatona sy hiala amin'ny fanazaran-tena.
Mety tsy afaka mampitombo be ny orinasanao ianao.
Amin'ity infographic avy amin'ny First Data ity dia manome ny sasany amin'ireo statistika, tetika ary tetika mifandraika amin'izy roa ireo paikady fahazoana sy fitazonana. Ny tsara indrindra dia manome torolàlana izy ireo amin'ny fandanjana ny ezaky ny varotra sy ny varotra eo amin'ireo paikady roa.
Fanamarihana vs. statistika fitazonana
Tombanana ho efa ho 40% amin'ny vola miditra avy amin'ny orinasa ecommerce dia avy Avereno mpanjifa.
Manana ny orinasa Kisary 60 ka hatramin'ny 70% ny fivarotana amin'ny an misy mpanjifa raha oharina amin'ny 20% lanjany hoan'ny vaovao mpanjifa.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana sasany dia tokony hifantoka amin'izany ny orinasa efa niorina tsara 60% n'ny loharanom-barotra amin'ny fitazonana ny mpanjifa. Orinasa vaovao tokony hanokana ny betsaka amin'ny fotoanany amin'ny fahazoana, mazava ho azy.
Fandanjana ny fahazoana vs. fihazonana
Ny ezaka ataonao amin'ny varotra dia afaka mamaritra ny fahaizanao mandray na mitazona ny mpanjifa. Misy paikady dimy haparitaka ho an'ny roa:
Mifantoha amin'ny kalitao - manintona mpanjifa vaovao ary ampirisiho ireo efa misy hijanona amin'ny serivisy sy vokatra miavaka.
Midira amin'ny mpanjifa ankehitriny - ataovy izay hahatsapan'ny mpanjifa misy anao fa sarobidy amin'ny fangatahana azy ireo hanaparitaka ny momba anao amin'ny alàlan'ny hevitra an-tserasera
Raiso ny varotra an-tserasera - Ampiasao ny haino aman-jery sosialy hifandraisanao amin'ny mpanjifa vaovao sy ny marketing amin'ny mailaka mifantoka hifandray amin'ireo efa misy.
Tombano ny tobin'ny mpanjifanao - atsofohy ao anaty angon-drakitrao hahitanao hoe iza amin'ireo mpanjifanao ankehitriny no tena mendrika ny hihazona azy ireo ary iza no tsia.
Makà manokana - Mandefasa naoty an-tanana amin'ny mpanjifa efa misy ho an'ny marketing mahomby izay manampy amin'ny fananganana vavahady mahery.
Momba ny Data voalohany
voalohany Data dia mpitarika manerantany amin'ny fandoavam-bola sy ny haitao ara-bola, manompo andrim-bola aman'arivony maro sy mpivarotra sy orinasa an-tapitrisany any amin'ny firenena maherin'ny 100.
Shoutem: Ny sehatra fampivoarana ny fampiharana finday mahomby indrindra
Manampia sakafo Podcast ivelany amin'ny fahan-tranonkalanao WordPress